Kulan lagu taageerayo shirka Khaatumo 2 ee lagu qaban doono Taleex oo maanta ka dhacay Buuhoodle. – Radio Daljir
Seteembar 28, 2011 12:00 b 0
Buuhoodle, Sept 28 ? Bulashada gobolka Cayn ayaa si weyn u taageeray soona dhaweeyey qorshe lagu qaban-qaabinayo shir wadatashi ah oo ka dhici doona degmada Taleex ee gobolka Sool, kaasoo ay hormuud ka yihiin qurba-jooga gobollada SSC ka soo jeedda, shirkaasi oo loogu magac daray Khaatumo2.
Shir ballaaran oo ay isugu yimaadeen odayaasha, cuqaasha iyo waxgradka gobolka Cayn, ayna goob-joog ka ahaayeen maamulka gobolka Cayn iyo midka degmada Buuhoodle oo maanta lagu qabtay Buuhoodle ayaa lagu muujiyey taageerada loo hayo hirgalka shirkaasi oo qusayn doona arrimaha daneed ee gobollada SSC.
Odayaashii shirka ka hadlay ayaa sheegay inay rabeen shirka in lagu qabto magaalada Buuhoodle, balse waxay tilmaameen haddii loo gartay degmada Taleex, in ay aad u soo dhaweynayaan qabsoomidda shirkaasi, waxaana Caaqil C/raxmaan Axmed Olol, oo kamid ah cuqaasha gobolka Cayn ayaa shirkaasi hadal ka jeediyey wuxuuuna shaaca ka qaaday in shirkaasi ay aad ugu qanceen ayna diyaar u yihiin ka qayb-galkiisa.
“Waxaan taageeraynaa oo aan aad iyo aad u taageeraynaa shirka lagu qabanayo degmada Taleex ee gobolka Sool haddii aanu nahay cuqaasha iyo waxgaradka gobolka Cayn” ayuu yiri Caaqil C/raxmaan Axmed Olol.
Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Caaqil Cabdilaahi Xasan Qanbi, waxaana uu tilmaamay in shirkaasi ay soo daoweynayaan waxgaradka iyo cuqaasha gobolka Cayn waxaana uu yiri “shirka lagu qabanayo Taleex waan soo dhaweynayaa alle waxaan ka baryayaa in shirkaasi noqdo mid miro dhala, ayna ka soo baxaan wax u cuntama bulshada gobollada SSC.
Intaasi kadib ayaa waxaa madasha ka hadlay guddoomiye kuxigeenka gobolka Cayn Maxamuud Sh Cumar Xasan, waxaana uu sheegay in shirkaasi ay soo dhaweynayaan ka maamul ahaan, waxaana uu meesha ka saaray warar dadka qaar isla dhexmaraan oo sheegaya in dawlada Puntland ka horjeedo shir ay yeeshaan beelaha gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn isagoo tusaale u soo qaatay shirkii ka dhacay deegaanka Buurawadal sanadkii hore.
Marka la iskusoo wada duubo shirkan maanta ay magaalada Buuhoodle kuyeesheen waxgaradka iyo cuqaasha gobolka Cayn ayaa noqonaya kii u horreeyey oo lagu taageero shirka Khaatumo2 ee ka dhici doona degmada Taleex ee gobolka Sool bartamaha bisha soo socota ee October, waxaana shirkani kusoo beegmayaa iyadoo dhowaan lagu dhawaaqay goobta uu shirka Khaatumo2 ka dhici doono kaasi oo mudo bilo ah qaban qaabadiisu ka socotey deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn iyo waddamada dibada.
Wasiiru-dawlaha dastuurka Puntland Prof. Jimcaale oo ka mid ah waftiga Puntland ee ka qaybgalaya shirka Copenhagen, kana waramay ajandayaashiisa.
Baahin: Salaasa, Sept 27, Weriye Maxamed C. Kuuriya ~ Daljir ~ Bossaso. Issimada Puntland oo soo gunaanaday, saxiixayna heshiiskii colaadii Galkacyo; baaq & dardaaranna u jeediyey shacabka gobolka Mudug; Banaanbax looga cabanayo maaraynta imtixaanaadkii deeqda waxbarasho ee Turkiga oo ka dhacay Badhan, Sanaag; 1,000 askari oo ka tirsan ciidanka dawlada feredaalka ah oo tababar ugu soo xirmay gobolka Gedo.